“မမနဲ့မောင်” နောက်တစ်တွဲထွက်ပေါ်လာတော့မှာလား? – Trend.com.mm
Posted on May 2, 2018 May 2, 2018 by Noel
ဧပြီ ၃၀ရက်နေ့က Channel A ရဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Poongmoon Show”ကနေ တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့Son Ye Jin နဲ့ Jung Hae In တို့နှစ်ယောက် ကြားက ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတွေ ကိုပြောပြခဲ့တယ် လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အခုလတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ‘The Pretty Noona Who Buys Me Food’ ဆိုတဲ့ရိုမန်တစ်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပြီး အပြင်လက်တွေ့မှာလည်း တကယ့်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်း ပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆိုအရ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေ၊ ရင်းနှီးမှုတွေကိုကြည့်ရင် ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဒီလိုပဲခံစားရမှာဖြစ်တယ် လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရှိုးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကလည်း “Son Ye Jin နဲ့ Jung Hae In တို့ရဲ့ SNS အကောင့်တွေမှာတင်ထားကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အပြင်မှာလည်းတကယ်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့
အလားအလာ ၅၀/၅၀ ရှိတယ်”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေတင်မက ဧပြီ ၂၆ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Press Conference က ဗီဒီယိုကိုလည်း ပြန်ပြီးပြသကာ ဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးတွေ့တွေ့ချင်းခံစားချက်တွေကိုမေးမြန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းသမီး Son Ye Jin ဟာ “ဒီဒရာမာဇာတ်ကားပြီးဆုံးသွားမှာကိုတောင်စိတ်ပျက်သလိုခံစားနေမိတာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။နေ့တိုင်းရိုက်ကူးနေရတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုချင်းစီကပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
မင်းသား Jung Hae In ကလည်း “ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတုန်းမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေခံစားခဲ့ရပြီး နေ့ရက်တိုင်းအတွက် အရမ်းကျေနပ်မိပါတယ်။ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတုန်း ပျော်ရွှင်ရပါလားဆိုတာ နားလည်သွားစေခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားလည်းဖြစ်သလို ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးပြန်ကြည့်မိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့ နှစ်ယောက်သားရှိန်နေကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာရင်းနှီးလာခဲ့ပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သက်တော့င်သက်သာဖြစ်သလိုခံစားရတဲ့အကြောင်း၊Seo Ye Jin ကလည်း သူ့အပေါ်ဂရုစိုက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာခံစားရအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့တစ်ဖွဲ့သားလုံး
မင်းသမီးချော Seo Ye Jin ကတော့ “အခုဆိုရင် သူမဟာ အမျိုးသမီးတော်တော်များများရဲ့ ရန်သူဖြစ်နေပါတယ်၊ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အမျက်ဒေါသကို ရရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။အခုလို တုံ့ပြန်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပျော်ရွှင်ရသလို Jung Hae In ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့ ရယ်မောစွာပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုရရှိခဲ့ပြီးဘယ်အချိန်ပဲပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်တဲ့။
ရှိုးပွဲကိုလာခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကတော့ ထူးခြားစွာနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။”အဲ့ဒီနေ့က press conference ပွဲကို သူလည်း တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Song Hye Kyo နဲ့ Song Joong Ki တို့ရဲ့ ‘Descendants of the Sun’ press conference ပွဲတုန်းကလိုတူညီတဲ့ခံစားချက်မျိုးရရှိခဲ့တယ်” လို့ပြောပြခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ‘The Pretty Noona Who Buys Me Food’ ဇာတ်ကားမှာလည်းSong Hye Kyo နဲ့ Song Joong Ki တို့ရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတာမျိုးလည်းပါဝင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကဲ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကရော ဘယ်လိုများလဲ?
ဧပွီ ၃ဝရကျနကေ့ Channel A ရဲ့ အစီအစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ “Poongmoon Show”ကနေ တောငျကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှဖွေဈကွတဲ့Son Ye Jin နဲ့ Jung Hae In တို့နှဈယောကျ ကွားက ဆကျဆံရေးနဲ့ပတျသကျပွီး သူတို့ရဲ့ ဆနျးစဈလလေ့ာမှုတှေ ကိုပွောပွခဲ့တယျ လို့သိရပါတယျ။သူတို့နှဈယောကျဟာ အခုလတျတလော ရပေနျးစားနတေဲ့ ‘The Pretty Noona Who Buys Me Food’ ဆိုတဲ့ရိုမနျတဈဇာတျကားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျနသေူတှဖွေဈပွီး အပွငျလကျတှမှေ့ာလညျး တကယျ့ခဈြသူတှဖွေဈသှားနိုငျတယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ရတဲ့အကွောငျး ပွောပွသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဝဖေနျဆနျးစဈသူတဈယောကျရဲ့ အဆိုအရ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ သရုပျဆောငျပုံတှေ၊ ရငျးနှီးမှုတှကေိုကွညျ့ရငျ ပရိသတျတှအေားလုံးလညျးဒီလိုပဲခံစားရမှာဖွဈတယျ လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီရှိုးပှဲကိုတကျရောကျခဲ့တဲ့ သတငျးထောကျတဈယောကျကလညျး “Son Ye Jin နဲ့ Jung Hae In တို့ရဲ့ SNS အကောငျ့တှမှောတငျထားကွတဲ့ဓာတျပုံတှကေိုကွညျ့ရငျ သူတို့နှဈယောကျဟာ အပွငျမှာလညျးတကယျခဈြသူတှဖွေဈသှားနိုငျတဲ့
အလားအလာ ၅၀/၅၀ ရှိတယျ”လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဓာတျပုံတှတေငျမက ဧပွီ ၂၆ရကျနကေ့ကငျြးပခဲ့တဲ့ Press Conference က ဗီဒီယိုကိုလညျး ပွနျပွီးပွသကာ ဆနျးစဈမှုတှလေုပျခဲ့ကွပါတယျ။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ပထမဆုံးတှတှေ့ခေ့ငျြးခံစားခကျြတှကေိုမေးမွနျးထားတာတှရေ့ပါတယျ။မငျးသမီး Son Ye Jin ဟာ “ဒီဒရာမာဇာတျကားပွီးဆုံးသှားမှာကိုတောငျစိတျပကျြသလိုခံစားနမေိတာ ဒါပထမဆုံးအကွိမျပါပဲ။နတေို့ငျးရိုကျကူးနရေတဲ့ဇာတျဝငျခနျးတဈခုခငျြးစီကပြျောရှငျကွညျနူးစရာကောငျးပါတယျ”လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
မငျးသား Jung Hae In ကလညျး “ရုပျရှငျရိုကျကူးနတေုနျးမှာ ပြျောရှငျကွညျနူးမှုတှခေံစားခဲ့ရပွီး နရေ့ကျတိုငျးအတှကျ အရမျးကနြေပျမိပါတယျ။ပွီးတော့ ရုပျရှငျရိုကျကူးနတေုနျး ပြျောရှငျရပါလားဆိုတာ နားလညျသှားစခေဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရုပျရှငျကားလညျးဖွဈသလို ပရိသတျတဈယောကျအနနေဲ့ပထမဆုံးပွနျကွညျ့မိတဲ့ရုပျရှငျကားလညျးဖွဈပါတယျ။ပထမတော့ နှဈယောကျသားရှိနျနကွေပမေဲ့ နောကျပိုငျးမှာရငျးနှီးလာခဲ့ပွီးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သကျတော့ငျသကျသာဖွဈသလိုခံစားရတဲ့အကွောငျး၊Seo Ye Jin ကလညျး သူ့အပျေါဂရုစိုကျပွီး သကျတောငျ့သကျသာခံစားရအောငျကူညီပေးခဲ့ပါတယျ။ရုပျရှငျရိုကျကူးတဲ့တဈဖှဲ့သားလုံး
မငျးသမီးခြော Seo Ye Jin ကတော့ “အခုဆိုရငျ သူမဟာ အမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားရဲ့ ရနျသူဖွဈနပေါတယျ၊ပွီးတော့ဒီလိုမြိုးတှဲဖကျသရုပျဆောငျနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အမကျြဒေါသကို ရရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကွိမျပါပဲ။အခုလို တုံ့ပွနျမှုတှရေရှိခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ပြျောရှငျရသလို Jung Hae In ကိုလညျးကြေးဇူးတငျပါတယျ”လို့ ရယျမောစှာပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။ရုပျရှငျဇာတျကားအတှကျဓာတျပုံတှရေိုကျကူးတိုငျး စိတျလှုပျရှားမှုရရှိခဲ့ပွီးဘယျအခြိနျပဲပွနျကွညျ့ပွနျကွညျ့ စိတျခမျြးသာရပါတယျတဲ့။
ရှိုးပှဲကိုလာခဲ့တဲ့ နောကျထပျသတငျးထောကျတဈယောကျကတော့ ထူးခွားစှာနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ခံစားခကျြကိုပွောပွခဲ့ပါတယျ။”အဲ့ဒီနကေ့ press conference ပှဲကို သူလညျး တကျရောကျခဲ့တာဖွဈပွီး Song Hye Kyo နဲ့ Song Joong Ki တို့ရဲ့ ‘Descendants of the Sun’ press conference ပှဲတုနျးကလိုတူညီတဲ့ခံစားခကျြမြိုးရရှိခဲ့တယျ” လို့ပွောပွခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျ။ဒီ ‘The Pretty Noona Who Buys Me Food’ ဇာတျကားမှာလညျးSong Hye Kyo နဲ့ Song Joong Ki တို့ရဲ့ဇာတျဝငျခနျးတဈခုနဲ့ခပျဆငျဆငျတူတာမြိုးလညျးပါဝငျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကဲ သငျ့ရဲ့ထငျမွငျခကျြကရော ဘယျလိုမြားလဲ?
ညဘက်တွေ ကလေးအငိုမတိတ်လို့ မိခင်ရော၊ ကလေးရော အိပ်ရေးပျက်ပေါင်းများနေပြီလား ?